APC Achụtuola PDP na Bayelsa
Onye zọrọ ọkwa gọvanọ na Steeti Bayelsa n'otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị All Progressive Congress eturula ugo na ntụliaka gọvanọ emere ụbọchị Satọdee. Lyon, bụ onyr meriri ba okpuru ọchịchị ime obodo isii n'ime asatọ enwere na steeti ahụ, meriri onye otu ya gbasoro ya mgba dịka nwoke, Sinatọ Douye Diri nke otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị People's Democratic Party, onye nwetara mmeri na okpuru ọchịchị ime obodo abụọ.
NDLEA Emebiela Ala Karịrị Hecta Iri Anọ A Kọrọ Hemp n'Ibadan
Ụlọọrụ na-ahụ maka ọgwụ ike n'ala anyị, NDLEA n'aha mkpirisi, ngalaba nke Oyo Steeti, nọrọ ụbọchị Tọzdee mebie ala dị ihe dịka hectare iri anọ akọrọ hemp na Aba Tade, dị n'okpuru ọchịchị ime obodo Oluyole, na Oyo Steeti. Onyeisi ngalaba NDLEA na steeti ahụ, Maazi Ralph Igwenagu, kwuru na ngalaba ahụ emebiela ala dị hectare isii n'akụkụ Oke Ogun na steeti ahụ n'oge gara aga.
Nsogbu Ókè Àlà Anambra Na Enugu: NBC Amàlitela Ọrụ Ịkpazi Ókè
Igbo sị na ọ na-abụ a kpaa akpaa, a rahụọ n'ute, ma sịkwa na ọ na-abụ a dị n'ìzù a nata ndị mmụọ ihe. Ụlọ ọrụ ahụ okwu bànyere oke ala dị n'aka n'ala Nigeria, bụ 'National Boundary Commission (NBC)' agbapeela amụmà ọrụ ịkpa ókè àlà anya ọzọ na nsogbu oke ala ahụ na-adapụta n'etiti ụfọdụ obodo steeti Anambra na steeeti Enugu, n'ebe steeti abụọ ahụ gbàrà agbataobi, iji hụ na e kpèzìrì ya ma mekwa ka ufo tọrọ àtọ laghachi.
Adịnụba Adụọla Ndị Ntorobịa Na-Ede Akwụkwọ Ka Ha Gbado Anya
Igbo sị na ọ bụ ka onye si eme ka oku si akpọ ya, ma sịkwa na ùgwù dike anaghị agha ya, ma na ndụ ma n'ọnwụ. Ka ọ dị taa, a kọwaala otu onye edemede a mà amá, bụ ọkammụta Chịnua Achebe lagoro mmụọ dịka odogwu nwoke ọka ibe, na onye nwere ezi ọhụhụ ụzọ.
Ọhaneze Ndị Igbo Egùzobela Ngalaba Ya n'Okpuru Ọchịchị Orumba South
Ọ kpọtụrụ akpọtụ ma zụọ azụọ n'okpuru ọchịchị Orumba South, dịka Ọhaneze Ndị Igbo gùzòbèrè ndị ndu ngalaba ya bụ òtù n'okpuru ọchịchị 'Orumba South' nke steeti Anambra. Ya bụ nnukwu mmemme nguzobe bụ nke dọtara ọtụtụ ndị eze ọdịnala obodo dị iche na steeti ahụ, tinyere ndị ọrụ gọọmenti, ndị ndu obodo ọtụtụ ndị ọzọ okwu ha nà-ada ụda na ya bụ steeti.
Ụlọakụ Etiti Ga-Etinye Ụmụ Na-Eto Eto Puku Iri Atọ na Isii N'Ọrụ Ugbo
Opekampe ụmụ na-eto eto dị puku iri n'ọnụ ọgụgụ kwa steeti ọ bụla n'ala ànyị Naijiria bụ ndị Ụlọakụ Etiti ga-etinye n'ọrụ ugbo iji were hụ na nri bụ atụrụ tawazie n'ala anyị ma sitekwa na ya mee ka ọrụ dịkwa.
Gọọmenti Anambra Agbapuola Mmiri Ọhụụ n'Urunnebo, Enugwu-Ukwu
Oke ọñụ dara n'ogige ụlọ ahụike Obu Ọzọm dị n'Urunnebo nke obodo Enugwu-Ukwu dị n'okpuru ọchịchị Njikọka nke steeti Anambra, dịka gọọmenti steeti ahụ gbàpùrù mmiri ọhụụ, bụ nke ji ọkụ si n'ikike anyanwụ were arụ ọrụ, ma nyefee ya n'aka ụlọ ahụike ntà ahụ.
Ụlọ Ọrụ FERMA Amalitela Idozisị Ụfọdụ Ụzọ N'Anambra
NCTUA Enwee Ọgbakọ n'Awka, Kpọọ Òku Maka Njikọ Aka Gọọmenti Steeti Na Gọọmenti Etiti
Ụlọ Omebe Iwu Anambra Ebinye Aka n'Amụmà Ego Ọrụ Nke Ahọ 2020